Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » I-YouTube iyakwandisa ukuthintela kwayo YONKE imixholo echasene nogonyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umgaqo-nkqubo owandisiweyo kaYouTube uyakusebenza “kwizitofu ezilawulwayo ngoku ezivunyiweyo zaze zaqinisekiswa ukuba zikhuselekile kwaye zisebenza ngabasemagunyeni bezempilo basekuhlaleni kunye noMbutho wezeMpilo weHlabathi.
I-YouTube ibhengeze ukuba iyakuyithintela yonke into kunye nawo nawuphi na umxholo wokugonya phantsi komgaqo-nkqubo omtsha owandisiweyo.
Umgaqo-nkqubo omtsha uya kususa nawo onke amabango obuxoki malunga nokugonywa kwesiqhelo kwezifo eziqhelekileyo.
I-YouTube ikwalela onke amajelo anxulumene nabaphembeleli abachasayo bokugonya.
I-YouTube, ekwabelwana ngevidiyo kwiMelika kwi-intanethi kunye neqonga losasazo lasekuhlaleni elilelikaGoogle, ibhengeze ukuba iyatshintsha kwaye yandisa umgaqo-nkqubo wayo kulwazi lwezonyango kunye nezempilo kwaye iyakuyinqanda yonke kunye nayo nayiphi na imixholo echasene nogonyo ukusukela ngoku.
Ukudlulela ngaphaya kokuvalwa kolwazi olungeyonyani malunga nezitofu ze-COVID-19, isigantsontso seendaba zentlalo sathi umgaqo-nkqubo omtsha uya kuchaphazela nezinto ezinolwazi olungeyonyani malunga nezinye izitofu ezivunyiweyo.
YouTubeUmgaqo-nkqubo owandisiweyo uyakusebenza “kwizitofu ezisetyenziswayo ngoku ezivunyiweyo zaze zaqinisekiswa ukuba zikhuselekile kwaye ziyasebenza ngabasemagunyeni bezempilo basekuhlaleni I-World Health Organization (WHO), ”Yatsho le nkampani kwingxelo.
Umgaqo-nkqubo omtsha uza kuvala kwaye ususe onke amabango obuxoki malunga nokugonywa kwesiqhelo kwezifo ezifana nemasisi, iHepatitis B kunye nomkhuhlane.
Oko kungabandakanya iimeko apho ii-vlogger ezihambisa umxholo eqongeni zibanga ukuba izitofu ezivunyiweyo azisebenzi, okanye ngokungafanelekanga zinxulunyaniswa neziphumo zempilo ezingapheliyo.
YouTube Umxholo othe "uxoka ukuba izitofu ezivunyiweyo zibangela i-autism, umhlaza okanye ukungachumi, okanye ukuba izinto kwizitofu zokugonya zinokulandela abo bazifumanayo" ziya kuncitshiswa.
I-YouTube ikwathintela amajelo anxulumene nabaphembeleli abachasayo abachasene no-Robert F Kennedy Jr noJoseph Mercola, utshilo isithethi se-YouTube.
Ngokwe-YouTube, yayisuse ngaphezulu kwe-130,000 yevidiyo ukusukela kunyaka ophelileyo ngokwaphula imigaqo-nkqubo yayo yokugonya ye-COVID-19.
Ngolwesibini, YouTube yayivalile amajelo olwimi lwesiJamani kwilizwe laseRussia elasasaza i-RT ngenxa yokophula izikhokelo zayo ze-COVID-19 ezingezizo.
I-YouTube ithe ikhuphe isilumkiso kwi-RT ngaphambi kokuvala la majelo mabini, kodwa inyathelo lakhokelela kwisoyikiso esivela eMoscow sokuvimba indawo yevidiyo.
"Njengalo naluphi na uhlaziyo olubalulekileyo, kuyakuthatha ixesha ukuba iinkqubo zethu ziqinise ukunyanzeliswa," yongeze i-YouTube kwingxelo yayo.
I-YouTube ayisiyiyo kuphela imithombo yeendaba enkulu yoluntu ejongene nendlela yokujongana nokusasazeka kwe-COVID-19 ithiyori yeqhinga kunye nengcaciso engeyiyo kwezonyango ngokubanzi.
I-Facebook kule nyanga isungule iinzame ezihlaziyiweyo zokujongana nobundlobongela kunye namaqela ayila iyelenqe, eqala ngokuthatha inethiwekhi yaseJamani esasaza ulwazi olungelulo lwe-COVID-19.